Juventus oo dib ugu soo laabatay hoggaanka Serie A, kaddib markii ay kulankii Derby d’Italia ku garaacday kooxda Inter… +SAWIRRO – Gool FM
Dajiye March 8, 2020
(Turino) 09 Mar 2020. Juventus ayaa dib ugu soo laabatay hoggaanka horyaalka Serie A, kaddib markii ay kulankii Derby d’Italia ku garaacday kooxda Inter Milan 2-0, xilli ciyaartan ay qeyb ka aheyd kulamada 26-aad ee horyaalka Talyaaniga.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray kulankii adkaa ee Derby d’Italia bar-bardhac 0-0 ah.
Daqiiqadii 55-aad kooxda martida loo ahaa ee Juventus ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 1-0 ka dhigay dheesha Aaron Ramsey, iyadoo caawinta goolkan loo qoray Cristiano Ronaldo.
Laakiin daqiiqadii 67-aad Juventus ayaa dhalisay gool labaad, waxaana ciyaarta 2-0 ka dhigay xiddiga reer Argantina ee Paulo Dybala kaasoo badel ku soo galay, kaddib markii uu goolkan ka caawiyay Aaron Ramsey.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo idlaatay 2-0 ay kaga adkaatay kooxda Juventus naadiga Inter Milan oo marti ugu aheyd garoonka Allianz, Marwada duqda ayaana markale la wareegtay hoggaaminta horyaalka Talyaaniga.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Juventus iyo Inter ee horyaalka Serie A oo la shaaciyay
Real Betis oo guuldarro ku baday garoonkeeda kooxda Real Madrid… +SAWIRRO